Vietnam, Halong: incazelo kanye nezithombe
Isihloko lesi sihloko - Halong Bay (Vietnam). Izithombe zalesi Ukukhangwa okungokwemvelo kwanele ukuba siqonde ukuthi kungani UNESCO ngo-1994, kuhlanganise Gulf ohlwini World Heritage Lesintu. Futhi tour opharetha, esiqondisa amakhasimende ayo eNingizimu-mpumalanga Asia, ke iphindwa nempinda: "Uma ungenalo zibabaza Halong, kodwa wena wangabona Vietnam!" Awu, ulandele izincomo a abasebenzi inkampani yokulungisela abahambayo. Kulesi sihloko sichaza uma kuhamba phambili ukuvakashela Halong Bay, kanjani ukuze uthole ethandwa kakhulu zokungcebeleka eVietnam, lapho ukuphila futhi yini enye ukuba uqalaza. Umsuka wegama bay ngenxa legend ezinhle ezimayelana dragon. Monster wahlala isikhathi eside e ezintabeni, aze ngokuzumayo wathukuthela. Ukubhubhisa zonke endleleni yayo, udrako waphonseka olwandle. Manje unamathele aphume kwamanzi kuphela yakhe namazinyo-isiqhingi. Futhi igama "Halong" lihunyushwa ngokuthi "indawo lapho udrako wehlela kolwandle."
The main zemvelo Luhambo Vietnam itholakala enyakatho-mpumalanga yezwe. idolobha Same kungokwalabo sifundazwe Nuangnin. A Halong Bay (Vietnam) kuyingxenye eGulf of Tonkin (abendawo ukukubiza ngokuthi Beibu) South China Sea, Pacific Rim. Yini idume kangaka ngoba, lokhu ichibi? endaweni yayo - nengxenye ayizinkulungwane amakhilomitha square. Futhi kuyo yonke bay ngendlela kunezinxushunxushu besakazeke iziqhingi izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nanye nje rocks. Kwezinye ukuma fancy yokuthi uma ubheka kubo, kubonakala sengathi - Alice, zibalwa ezweni inganekwane. Uma baziphonse iziqhingi ngesikebhe, bese kuzobonakala Imigede eziningi nasemigedeni - ne elilengayo futhi stalagmites. Kukhona eyihlane amabhishi, jungle nezinye ubuhle. Ngelilodwa nje, ipharadesi. Futhi uvakashele lapha Kunconywa ukuba wonke umuntu wafika kuleli zwe-mpumalanga Asia.
Sinini isikhathi esingcono ukuvakashela Halong
Le ukhangwa wobuhle ekuseni akakaze entula iphathi. Futhi cashing kule abakhileyo eponymous komuzi, okuyinto, ngaphandle kwe-bay, akukho ezithakazelisayo ngokuya ezokuvakasha akuyona. Nokho ungakhohlwa ukuthi kule ndawo - neNyakatho yeVietnam. Halong ebusika ngokuvamile zihambisana polivaema yenkungu Ukukhemezela. Lokhu off-inkathi siphela kusuka February kuya ekuqaleni kuka-April. Futhi nakuba kolwandle kanye neziphepho, ukubonakala kubi ngempela. Ezinomoya, ezimanzi kanye sezulu kancane ezibandayo akanawo kakhulu abathanda ubuhle. Futhi lonke ngonyaka ethekwini livela amehlo bamangala lezihambi ezivela emhlabeni wonke kuwo wonke charm yayo ukuziba. Uma ufuna ukuhlanganisa nokucabanga ubuhle bemvelo ngibhukuda Yiqiniso, kuhle lokhu ukhethe olushisayo izinyanga. Kodwa-ke kukhona awokuthi imvula. inkathi High kulezi zingxenye kukhona nezikhathi Apreli-Meyi no September-Okthoba.
Vietnam, Halong Bay: Ukuthola khona
Kusukela enhloko-dolobha, Luhambo ukuhlehlisa amakhilomitha namashumi ayisikhombisa eyodwa kuphela futhi. Ngakho-ke, lapha ungakwazi kalula uhambe ngoba ngosuku. Kusukela Hanoi ukuze Halong idolobha Shuttle abaqeqeshi. Kwangathi beshumayela Digne. Kukhona kungenzeka ukuya nesitimela, kokubili ezivamile futhi ngesivinini express. Enye ezithakazelisayo - ukuthenga uhambo usuku Halong Bay. Wena ngokushesha ukuthatha indawo amancane ukhululekile futhi uyothwala esikebheni izivakashi siqhingi enkulu Cat Ba. Trip ithatha isikhathi eside kunaleso amahora ayisithupha kuhlanganisa ukuvakashela yisakhiwo sodumo izimpawu zendawo bay. abahambi Independent kudingeka ukubhuka ngokwabo indawo isikebhe. Ithikithi izobiza namashumi amathathu amawaka dong. Le ntengo kuhlanganisa umnyango esiqiwini. Ngu itekisi esuka Hanoi uhambo izobiza amadola amahlanu.
Uhambo lwezinsuku kuya bay fabulous nakwamanye amadolobha resort
izivakashi eziningi dream wokubona ngawawo ngokumangalisayo Halong Bay (Vietnam). Thola kuso kusukela Hanoi hhayi yinkimbinkimbi okukhulu. Phela, izinhlobo zanamuhla zokuthutha kuzosiza ukunqoba ibanga elilodwa lamatshumi ayisikhombisa amakhilomitha emahoreni ambalwa. Kodwa kungenzeka ukuvakashela bay olulodwa, ivela kwezinye izindawo zokungcebeleka eVietnam? Uma uhlale enyakatho, e Hai Phong noma iSapa ke ufika emzini Ha Long, futhi, ngeke kube nzima. Mhlawumbe awazi ngisho kudingeka kube kulolu ukuya Hanoi. Kodwa kungenzeka ukuvakashela bay kusukela zokungcebeleka eningizimu ezweni? Kusukela esiqhingini Phu Quoc futhi Ho Chi Minh City akunakwenzeka ukuba aphumelele. Okungenani usuku olulodwa. Itholakala izivakashi Halong Bay (Vietnam) kusukela Nha Trang? I bureau wendawo zithathwa ukuhlela ihlele ukuthi fabulous Bay for $ 450 umuntu ngamunye. Kodwa ngokuvamile ibuyisele le mali, ngoba ungatholi ngokwanele abafisa ukwakha iqembu. Iminyaka eyikhulu namashumi zamadola Kungenzeka ukuthatha uhambo Halong ngokwakho. Kodwa ukuthi kufanele uqale uthole Hanoi. Lokhu kwenziwa kalula ndiza ka "Airlines Vietnam", "Jetstar" noma "VetDzhet". Futhi kusukela lapho ngesitimela noma ngebhasi ungakwazi kalula ukufinyelela bay ayesifuna ngabomvu.
Halong Bay Amahhotela (Vietnam)
Leli dolobha lalisemzileni oya ezimayini ipharadesi. Umnyango njengoba umnyango. Kulabo odlula ezulwini, amasango akanandaba ke. Futhi zonke ezikhangayo dlula idolobha khaphi Halong ukuthula du. Ngakho lokho ungabona kule ndawo, okuyinto lakhiwa phezu kwedamu yokufakelwa, okuyinto ixhunyiwe capes ezimbili? Kuphela Halong Bay! I olunesihlabathi komuzi - ngobuningi, of interest abatshuzi abazi ukumela. Idolobhana ibhekwa abahambi kakhulu njengendawo yokulala ngemva kusihlwa kokuncoma bay. Ngakho-ke, ngo-Halong ezisibangela amahhotela. Ningahlala amahhotela isabelomali ukusuka olwandle, noma ebukhazikhazini "emihlanu" emgqeni wokuqala. Phakathi uyakufanelekela kakhulu kungenziwa ngokuthi "Vinpearl kuyona Ha Long". Uma ufuna ukudlulisa uhambo lwakho olwandle kumnandi, ungahlala kwesinye seziqhingi ezinkulu Gulf - at service yakho, noma Cat Ba Tuan Chau. Kuyoba yinto ebusuku ongenakulibaleka ebhodini liner okunethezeka (isibonelo, "Signatyur Royal Cruise") noma okungenamsoco bendabuko ( "Imperial Classic"), okuyinto eboshelwe indawo olunothile.
Tour izinhlobo. Flying phezu bay
Ukuze abahambi eza Vietnam, Halong Bay "inombolo kumelwe B 1" a. Ngakho-ke, bezohambo anikele ezihlukahlukene izinkambo olwandle. Labo Akungikhathazi kokuhlukana 175 zamadola, ungabona Halong Bay kusukela Ukubuka kweso lenyoni. Ukuze Helicopter uhambo wathatha abantu abayisithupha kwanele ukudayela. Oda lolu hambo kungaba inkampani "Northern Aerport Flight Service Inkampani". Izindiza usebenze njalo ngoMgqibelo at eziyisishiyagalombili ekuseni kusuka Hanoi Gia IsiL. Uma - nesihambeli ehhotela "Sofitel Metropole", uzobe ayiswe helipad mahhala. Kusukela ukuphakama uzobona zonke iziqhingi Halong Bay futhi wenze nemifanekiso emangalisa.
Ukuze uthole esiqhingini esiseduze Tuan Chau, ngeke kudingeke isikebhe. Phela, uxhuma ezwekazini ngumuntu obuphelele ibhuloho ikhilomitha elilodwa. Lesi siqhingi has a dolphinarium futhi abanye amahhotela - efana ezindlini ezamukela ezibizayo nesingakhangi. uhambo ejwayelekile uphakamisa ukugijima amahora amabili we bay kwi katerke elula nge zithi cababa on omunye emabhishi Katba. izivakashi Russian eza Vietnam, Halong ongaba nentshisekelo titov isiqhingi. I Cosmonaut abadumile Soviet wavakashela lapha iminyaka engu-70, futhi manje ungomunye emadwaleni ebizwa ngegama lakhe. Islands Bay of Plenty emihumeni Imigede, lapho ungafaka ngqo isikebhe. Cat Ba Isiqhingi idume jungle acwebile futhi imihlume ogwini.
Yini ukuletha kusukela Halong
Lokhu bay idume wonke Vietnam. Halong sihleli amaphosta yokukhangisa yezwe, ziphindaphindwe iqoqo ngifaka, odonsa, letinkomishi t-shirts. Ngakho-ke izinto eziyizikhumbuzo uzonikezwa. Njengesikhumbuzo of legend enhle esikhuluma ngokubutha okuyokwenzeka umsuka Halong Bay, uthola umfanekiso dragon. Futhi emakethe isikhumbuzo edolobheni, ungathenga isibonelo esihle ka junks bendzabuko ngaphansi njengegazi oseyili. Okunjalo zazitholakala bay. Uma ukubhuka isikebhe kusengaphambili, khona-ke ungakwazi nichithe ubusuku ebhodini yayo noma iya ngokudoba nalo.
Ski resort Dombay: indlela ukusuka eMoscow
Uhlu amadolobha e-Germany: ezindaweni amakhulu, amadolobhana amancane nayo yonke ezikhangayo bahlekisa German
Ipaki "Festival" eMoscow: umlando, incazelo kanye ukujwayelaniswa umzila
Impendulo yalo mbuzo othi: lapho eGreece iholide izingane?
Inhlonhlo Kerch: ubunjalo kanye ezikhangayo esemqoka
Amathangi amathangi ku-World of Tanks
Pleurisy: Izimpawu kanye nokwelashwa yalesi sifo
Kanjani ukuze ufunde ukuze sifake a pigtails amahle ukukhanya?
Isilinganiselwa amasosha kusukela ukubhuqwa okungokwemvelo lapho zabuna entsha uhlobo
Yokukhululwa emthwalweni zokuphatha. Igama elithi ka umthwalo wokuphatha
Isitifiketi hhayi umsebenzi kwezomnotho main - kungani idingeka?
Indlela ukuhlukanisa amadoda esuka jeans zabesifazane? iseluleko lochwepheshe
Izidakamizwa "Prostamol Uno": ukubuyekezwa, izincomo lokusebenza
Amacembe Seven Ukudla umzimba wakho ukwenzela ukungena okuncane kakhulu
Ukufakwa amanzi ohlelweni: ukuqaliswa manual kanye izici inqubo